XOG: Sidee ku fashilmay Dhul-boobkii madaxda G/Banaadir ku bixiyeen Qeyb ka mida Suuqa Siinaay? | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
26-kii Janaayo 2021 ayey ahayd markii si lama filaan ah uu guddoomiyaha Gobolka Banadir Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) u soo saaray wareegto uu ku sheegay inuu ku joojiyay dhammaan dhaqdhaqaaqyada dhul bixinta (Akhri Warkan), iyadoo ogeysiin loogu diray Madaxweynaha iyo Ra’iisal wasaaraha.
Arrintan ayaa sabab looga dhigay dhaliilo iyo eedo la isla dhex marayo oo ka dhan ah Waaxda Dhulka ee Dowladda Hoose ee Xamar, iyadoo wareegtada lagu ballan qaaday baaritaan lagu sameynayo arrintan, maan jirin wax faahfaahin ah oo laga bixin arrintan.
Baaritaan ay sameysay Goobjooge.net ayaa lagu ogaaday in arrintan ay ka dambeysay fadeexad ka dhacday bixinta Dhul qeyb ka ah suuqa Siinaay, degmada Wardhiigley, una dhaxeeya saldhigga Wardiigley iyo Suuqa oo ahaa dhul Danguud ah, ayna deganaayeen Dad dadyar ah iyo ganacsatada Haragaha ama maqaarka.
Kiiskan waxaa si oos ah ugu lug lahaa guddoomiyaha G/Banaadir Cumar Filish, ku- xigeenkiisa Amniga Cali Cabdi Wardheere (Cali Yare), waxaana ka war qabtay Guddoomiyaha Degmada Wardhiigley Seynab Maxamud Xaabsey, iyadoo dhulkaasi laga cabiray ku dhowaad 30 boos, ayna iibiyeen oo kharash ka qaateen madaxda G/Banaadir ee kor ku xusan.
Dadkii goobtaasi deganaa ayaa ka war helay Ganacsato iyo Dad sheeganaya lahaanshaha dhulka oo ku amray inay isaga guuraan, waxaana loo adeegsaday Baalleyaal ay la socdeen ciidamo badan oo lagu burburiyey, laguna banneeyay dhulkaasi, taasoo keenay in Doodii ka dhalatay bixinta dhulkaasi ay gaarto madaxtooyada Soomaaliya, markii ay xogtiisa dusiyeen qaar ka mida maamulka Gobolka Banaadir, loona mariyey marwo Seynab Cabdi Macallin.
Sida xogtu sheegeyso Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa u yeeray Cumar Filish, Cali Yare iyo xubno kale, si adagna ugala hadlay dhul-boobka ay ku dhaqaaqeeen, iyadoo laga dalbaday inay ka noqdaan, dibna goobtaasi ugu celiyaan dhul dan guud ah, isagoo ku canaantay inay xilligan kala guurka ah ay dadkii ku ceebeyanyaan, una qaateen inuusan awood lahayn.
Guddoomiye Cumar Filish ayaa markaas kadib soo saaray wareegtadii uu ku joojiyey dhulkii ay bixiyeen iyo bixinta dhul kale, waxaana maalmo kadib goobta la cabiray shir jaraa’id ku qabatay guddoomiyaha Wardhiigley Seynab Xaabsey oo sheegtay inaan meeshaasi la bxin karin oo amar kasoo baxay Madaxweynaha.
Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa intii uu muddo xileedka sharciga ahaa ku jiray ka war helay Dhulal badan oo Gobolka Banaadir uu bixiyey, balse uu ka gaabsaday inuu tallaabo ka qaado, waxaana ka mida:
1- Dhulka Garoonka Jasiira ee duleedka Muqdisho.
2- Dhul ku yaalla agagaarka saldhigga Degmada Hodon
3- Dhul duleedka ka ah SOS
4- Dhul saaran xeebta Garoonka Cisaley
DHUL DAN GUUD
Previous articleWararkii ugu danbeeyay shirka Baydhaba iyo horumar la sheegay in laga gaaray (Yaa tanaasulaya..?)
Next articleWasiirka Amniga Galmudug oo difaacay Bannaanbaxa Musharixiinta Mucaraadka ee Muqdisho